Fanaraha-maso kalitao - Newsway Valve Co., Ltd.
Rafitra fanaraha-maso kalitaon'ny NSW
Ny valves novokarin'ny Newsway Valve Company dia manaraka tsara ny rafitra fanaraha-maso kalitao ISO9001 hifehezana ny kalitaon'ny valves mandritra ny fizotrany iray manontolo mba hahazoana antoka fa 100% ny vokatra azo. Hanao fanaraha-maso matetika ireo mpamatsy anay izahay mba hahazoana antoka fa mendrika ny kalitaon'ny fitaovana tany am-boalohany.
Ny vokarantsika tsirairay avy dia hanana ny fahaizany mamantatra ny fanarahan-dia ny vokatra.
Manaova sary mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, ary avereno jerena ny sary fanodinana.
Ampahany fanaraha-maso kalitao:
1. Fanaraha-maso maso mivantana: aorian'ny fahatongavan'ny casting any amin'ny orinasa, zahao maso ara-maso ny filatsahana mifanaraka amin'ny fenitra MSS-SP-55 ary manaova firaketana an-tsoratra hanamafisana fa tsy manana olana kalitao ny filatsahany alohan'ny hametrahana azy ireo. Ho an'ny fanamoriana valizy dia hanao fizahana fitsaboana hafanana sy fizahana fitsaboana vahaolana izahay hahazoana antoka ny fahombiazan'ny fanodinana vokatra.
2.Valve Wall Wall test: ny casting dia ampidirina ao amin'ny ozinina, hizaha toetra ny hatevin'ny rindrin'ny vatan'ny valizy ny QC, ary azo apetraka ao anaty fitehirizana aorian'ny fahaizany.
3. Fandinihana ny zava-bita manta: ny fitaovana tonga dia voasedra amin'ny singa simika sy ny fananana ara-batana ary anaovana ny firaketana, ary avy eo dia azo apetraka ao aorian'ny fitahirizan-dry zareo.
4. Fitsapana NDT (PT, RT, UT, MT, tsy voatery arakaraka ny takian'ny mpanjifa)
1. Fanaraha-maso ny haben'ny masinina: manamarina sy manoratra ny habe vita araka ny sary famokarana ny QC, ary afaka miroso amin'ny dingana manaraka aorian'ny fanamafisana fa mahafeno fepetra izy.
2. Fanaraha-maso ny fahombiazan'ny vokatra: Aorian'ny fanangonana ny vokatra, hizaha toetra sy hanoratra ny zava-bitan'ny vokatra ny QC, ary avy eo hiroso amin'ny dingana manaraka aorian'ny fanamafisana fa mahafeno fepetra izy.
3. Fanaraha-maso ny haben'ny valve: Hizaha ny haben'ny valizy araka ny sary nataon'ny fifanarahana ny QC, ary mandroso amin'ny dingana manaraka aorian'ny fizahana ny fitsapana.
4. Fanandramana fampisehoana famehezana valve: ny QC dia manao fitsapana hidradradradrana sy fitsapana ny tsindry rivotra amin'ny tanjaky ny valizy, ny seza misy seza ary ny tombo-kase ambony araka ny fenitra API598.
Fanaraha-maso ny loko: Taorian'ny nanamafisan'ny QC fa mahafeno fepetra ny fampahalalana rehetra dia azo tanterahina ny loko ary azo jerena ny loko vita.
Fanaraha-maso fonosana: Hamarino tsara fa napetraka ao anaty boaty hazo fanondranana (vatan-kazo vita amin'ny hazo fisaka, boatina hazo natsofoka) ny vokatra ary manaova fepetra hisorohana ny hamandoana sy ny fanaparitahana azy.
Ny kalitao sy ny mpanjifa no fototry ny fahaveloman'ny orinasa. Newsway Valve Company dia hanohy hanavao sy hanatsara ny kalitaon'ny vokatray ary hifanaraka amin'izao tontolo izao.